Fumana Iinkonzo zokucoca i-Sparkle Melbourne kwi-RealtyWW Info
Fumana Iinkonzo zokucoca iiSparkle Melbourne
IMelbourne ((mamela) i-MEL-bərn) sesona sixeko sikhulu kunye nesona sixeko sabantu abaninzi eOstreliya eVictoria, kwaye sesesibini isixeko esihlala abantu abaninzi eOstreliya naseOceania. Igama laso libhekisele kudibaniso lweedolophu lwe-2,080 km2 (800 sq mi), equka indawo yedolophu kunye nomasipala be31, ikwayigama eliqhelekileyo lesixeko sayo. Isixeko sihlala ikakhulu kunxweme lwePort Phillip bay sisasazeka kwiindawo ezinqamlezayo ukuya kumda weDandenong kunye neMacedon, Inxalenye ye Mornington kunye ne Yarra Valley. Inabemi abazizigidi ezingama-5 (i-19% yabemi baseOstreliya), kwaye abahlali bayo babizwa ngokuba "yiMelburnians" .Isixeko sasekelwa nge30 Agasti 1835, kwikholoni yase-New South Wales yase-Britane mahala abahlali abavela koloni yeLizwe iVan Diemen's Land (iTasmania yanamhlanje). Yabandakanywa njengendawo yokuhlala yaseCrown e1837, yaze ke yabizwa ngokuba yiMelbourne nguRhuluneli Jikelele uRichard Bourke ngomhla we-10 ngo-Epreli 1837 iwonga iNkulumbuso yase-Bhritane, uWilliam Lamb, u-2nd Viscount Melbourne. Kwi-1851, kwiminyaka emine emva kokuba uKumkanikazi uVictor ebhengeze ukuba sisixeko, iMelbourne yaba likomkhulu lekoloni entsha yeVictoria. Ukuvuka kwe1850s yeVictorian yegolide engxamile, isixeko singene kwixesha elide le-boom elathi ngokufika kwe1880s, lasiguqula laba lelinye lawomhlaba omkhulu kunye nobutyebi belizwe. Emva komanyano lwase-Australia kwi1901, yasebenza njengesihlalo sethutyana sikarhulumente wesizwe esitsha de iCanberra yaba likomkhulu kwi-1927. Namhlanje, liziko eliphambili lezemali kwingingqi yeAsia-Pacific kwaye libeka i15th kwiZiko leMali yeHlabathi yeLizwe.Isixeko likhaya lamaziko amaninzi enkcubeko awaziwayo kwisizwe, njengeMelbourne Cricket Ground, yeSizwe Igalari yaseVictoria kunye neLizwe leLizwe leLifa leMveli lidweliswe. Ikwayindawo yokuzalwa kwembonakalo yase-Australia, imithetho yebhola yase-Australia, imiboniso bhanyabhanya yase-Australia kunye nomabonwakude kunye nomdaniso wexesha lase-Australia. Kutshanje, kuye kwaqwalaselwa njengesiXeko seNcwadi yeUNESCO kunye neziko lehlabathi lobugcisa besitalato, umculo ophilayo kunye nomdlalo weqonga. Sisisixeko esisingatha iminyhadala yaminyaka le yamazwe aphesheya njengeAustralia Grand Prix, iAustralia Open kunye neMelbourne Cup, kwaye ibambe ne-1956 Summer Olimpiki kunye neMidlalo ye-Commonwealth ye-2006. Ngenxa yokulinganisa ubukhulu becala kwezolonwabo, ukhenketho kunye nemidlalo, kunye nemfundo, ukhathalelo lwempilo, uphando kunye nophuhliso, i-EIU okwangoku iyibeka kwisixeko esisesona sibalaseleyo emhlabeni iminyaka ilandelana, ukusuka kwi-2011 ukuya kwi-2017. Isikhululo senqwelomoya esisebenza esixekweni sisikhululo seenqwelomoya iMelbourne (ekwabizwa ngokuba sisiThuthi seSikhululo saseTurlamarine), esesibini sezona ndawo zixakekileyo e-Australia, kunye neyona ndawo iphambili e-Australia kwizibuko lase-Melbourne. Isikhululo sayo sikaloliwe esikhulu esikufutshane nesikhululo sikaloliwe iFlinders esitratweni kwaye isiporo sayo somgaqo kaloliwe omkhulu kunye nesitishi somqeqeshi wesitrato sisemazantsi eSitrato. Inayo nenethiwekhi ebanzi kakhulu yendlela e-Australia kunye nenethiwekhi enkulu yedolophu yetram emhlabeni.
I-Sparkle ingabhekisa ku: I-Spark (yomlilo), i-incandescent chembe I-Sparkle (ikatamaran), ikhathalogu eyilwe ngu-Angus Primrose Sparkle (isiselo), isiphuzo esine-flavour sparkle Sparkle, uhlobo lweetawuli zephepha ezinabanini bakaGeorgia-Pacific Sparkle Plenty, umlinganiswa kwi-Dick Tracy comic strip Sparkle (isisa), amalungelo okuhambisa intshabalalo Sparkle (❇), indlela ye-dingbat Sparkle, California, kwi-Contra Costa County